प्रेम एउटा कोलाज | sociology/anthropology-nepal
प्रेम एउटा कोलाज
By Sociology Nepal on February 12, 2013
आज मेरो गाई हेर्ने पालो
राधा पनि जान्छ्यौ कि गोठालो ?
कुनै आस्तिक प्रौढले सुनेजस्तो रहेन, यो भजन मेरा लागि । बैँसालु उत्सुकताले भर्खर-भर्खर प्रवेश गर्दै गर्दा सुनेको हुँ, पशुपति किराँतेश्वरको डाँडामा । मलाई त रुमानी प्रेमगीत लाग्यो त्यो पनि । डेटिङका लागि कुनै अमूक स्थानमा भेट्नका लागि समेत पनि एसएमएस गर्नुपर्ने आजका घुसघुसे प्रेमीहरूका लागि त ठाडो चुनौती थियो, त्यो । अव्यक्त प्रेमीका लागि ठूलै प्रेरणा । त्यस प्रेमगीतले गाई गोठालो जाँदाका मेरा किशोर रहस्यलाई उत्खनन गरिरहेजस्तो लाग्थ्यो । त्यो म बाँचेको समाजको प्रेमशास्त्र थियो, सायद ।
नयाँ पत्रिकाबाट प्रेमका बारेमा लेखिदिने अनुरोध कल रिसिभ गरेपछि झट्ट दिमागमा आएको पहिलो सन्दर्भ यसै नयाँ पत्रिकामा केही पहिले छापिएको शीर्षक थियो : यो छिपछिपे प्रेमको युग हो । (२००८—०७—१४, सोमबार) । मुलुकका अगुवा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको अवलोकन थियो त्यो । अहिले प्रेमबारे लेख्नेहरूका लागि ‘पन्च लाइन’ ।
उनको हेराइमा ‘बजारको दबाब र सामाजिक संरचनाले प्रेमलाई गाढा बन्न दिँदैन । फास्टफुड प्रेम भनेको यही हो । यो कतिखेर सकिन्छ, थाहा हुँदैन । त्यसैले बिहान-बेलुकी पे्रमी-प्रेमिकाले भेट्नुपर्ने, एक-अर्काको तारिफ गरिरहनुपर्ने, उपहार दिइरहनुपर्ने भएको हो ।’
उफ ! प्रेमलाई जोगाइराख्न पनि यत्रो टन्टा । यो झमेला ! उनका अनुसार अहिलेको स्वतन्त्र पुस्ता प्रेममा पनि स्वतन्त्रता चाहन्छ । अर्थात् प्रेमको प्रकार समाजको अवस्थितिले निर्धारण गर्छ । हजुर, प्रेम देशकालअनुसारको हुन्छ, समय, स्थानसापेक्ष हुन्छ । प्रेमको रहर त शाश्वत होला, तर शैली र व्यवहार भने फरक हुन्छ ।
तर, उपभोक्तावादी पुँजीवादी चरित्र काठमाडौं, ठूला सहर हुँदै र सहरको सिको गर्दै गाउँ-गाउँ पसिरहेछ । गाउँका तरुनी-तन्नेरी सहरियाजस्तै बनेका छन् । अझ यसो भनौँ, गाउँकाले र सहरकाले देख्ने, सुन्ने, सिक्ने र भोग्ने कुरा उस्तै-उस्तै भइसके । समय र स्थानको भेदविहीन उत्तरआधुनिक चरित्र निर्माण भएको छ । सहर गाउँ पसेको छ । प्रेमको सहरिया शैली पनि गाउँ पसेको छ । सहर र गाउँको सीमा पातलिँदै गएको छ भन्ने थाहा पाउन तरुनी-तन्नेरीको व्यवहार र रहन-सहनको अध्ययनबाट पनि सकिन्छ । गाउँ-घरतिर जाँदा, बूढापाका त भन्ने गर्छन्, ‘गाउँ गाउँजस्तो कहाँ रह्यो र ? सब छाडा भइसके ।’
पुँजीवाद र प्रेम
केही वर्षपहिले समाजशास्त्रकी एक छात्राले धरानमा भएका पारपाचुकेको अध्ययन गरेर शोधपत्र तयार पारेकी थिइन् । उनका अनुसार पारपाचुके गर्नेको संख्या परम्परागत विवाह गर्नेहरूभन्दा प्रेमविवाह गरेका जोडीमा बढी रहेछ । यी समाजशास्त्रकी विद्यार्थीको शोधले चरित्र-चित्रण गरेको धराने प्रेम नै समाजशास्त्रका प्राध्यापकले भनेजस्तै छिपछिपे भएर हो कि ! वा व्यक्ति आफ्ना बारेको सम्पूर्ण निर्णयकर्ता आफैँ हुन चाहेर हो ! ऊ प्रेम गर्ने, विवाह गर्ने, सँगै बस्ने वा छुट्टनिे भन्ने कुराको निर्णय गर्न सक्षम छ । त्यस शैलीको बाँच्ने अधिकारको उपभोग गर्न चाहन्छ । ऊ अरूभन्दा यस युगसँग अलिक निकट छ । पुँजीवादले निर्माण गरेको व्यक्तिचरित्र पनि हो, त्यो ।
पँुजीवाद सांस्कृतिक रूपमा उपभोगवादी संस्कृतिको युग हो । उपभोग वस्तुको मात्र होइन भाषा, व्यवहार र शैलीको पनि गरिन्छ । प्रेम गर्नु पनि उपभोग्य शैली र व्यवहार बनेको छ, यतिवेला । त्यस्तै, प्रेम गर्नेहरूका लागि पुँजीवादले सिमाना पनि भत्काइदिएको छ ः परम्परा, जात, धर्म, उमेर, पेसा र राष्ट्रसमेतको । व्यक्ति स्वतन्त्र, स्वच्छन्द र सार्वभौम बनेको छ । दीपेन्द्रले देवयानीको प्रेमका खातिर वंशविनाश गरे भन्ने कथामा सत्यता कति छ त्यो अर्को कुरा, तर व्यक्ति र प्रेमको सार्वभौमिकताको अब्बल उदाहरण हो त्यो । पुँजीवादले निर्माण गर्ने व्यक्तिको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको सन्दर्भ बुझ्नका लागि कालान्तरसम्म उपयोग गर्न सकिने प्रतिनिधि उदाहरण हो त्यो ।
सन् २००२ मा युद्धग्रस्त क्षेत्रमा सोह्र साँझहरू बिताएर र्फकंदै गर्दा हाम्रा चालक राजुले बन्दीपुरमा गाडी बिसाए, चिया खाने बहानामा । यात्राका हामी तीनभाइ थकित थियौँ, शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि । सायद सबैभन्दा बढी थकित खगेन्द्र दाइ । तर, उहाँले चियाको पहिलो स्वादसँगै चियाले प्रदान गर्ने सरदर स्फूर्तिभन्दा बढी नै फुर्तिएर त्यतै हँुदो तनहुँका डाँडा-पाखामा उप्र“mदै, भाग्दै प्रेम गरेका रंगीन स्मरण स्वादिलो गरी सुनाउने मौका चुक्न दिनुभएन । प्रेमीको सम्झनाले मात्र पनि मानिसमा त्यत्रो फुर्ती सञ्चार गर्दोरहेछ । मेरा लागि त्यो क्षण चामत्कारिक थियो ।
सन् १९९६ को हिउँद हो, सायद । म अध्ययनका सिलसिलामा नर्वेमा थिएँ । लामो बिछोडपछि भेटिएका मेरा अग्रज मित्र लोक सुब्बाले सप्ताहान्तमा मलाई लङ ड्राइभ लिएर गइरहनुभएको थियो । हिउँले छपक्कै ढाकेको त्यस भू-भागमा हिउँबाहेकको पृथ्वीको सतह कतै देखिँदैनथ्यो । बाक्लो हिउँमा नागबेली लयमा गाडी कुदाउँदै सुनाउनुभए’थ्यो, ‘सुरेशजी ! मानिसले अरूलाई त झुक्याउँछन् नै, तर आफूले आफूलाई झुक्याउनुको मज्जा नै अर्को हुँदोरहेछ ।’
‘के भयो र लोकदाइ ?’
‘मैले पनि लभ गरँ नि !’
हामी दुवै मज्जाले हाँस्याँ ।
शालीन नर्वेली महिला च्यास्टी मोलरप सुब्बासँग घरजम गरेर उतै बसेका लोक सुब्बा नेपाली राजनीतिका भरोसालाग्दा व्यक्तित्व थिए । नर्वेको आकर्षणले भन्दा उनी बाँचेको विशेषतः तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिले घचेटेर त्यहाँ पुगेका उनी अन्ततोगत्वा उतै स्थापित भए । कारण थियो, प्रेम । उनका लागि आफैँले आफैँलाई झुक्याउने खेल ।
प्रेम ! आखिर यो कस्तो पजल हो ? वा के हो प्रेम ? भ्रम ? समर्पण ? मलाई लाग्छ, प्रेमको सर्वव्यापकता र सर्वोपरि चरित्रलाई परिभाषामा बाँध्नै सकिँदैन । परिभाषित गर्नै सकिँदैन । परिभाषा निर्माण गरेर प्रेम गर्ने प्रेमी होइनन् । तपाइर्ं कसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसमा तपाइर्ंको केही नियन्त्रण होला, तर तपाइर्ंलाई कसले प्रेम गर्छ, यो तपाइर्ंको वशको कुरा होइन । के तपाइंलाई तपाइर्ंको अनुमतिविना नै प्रेम गर्नेहरूप्रति कुनै गुनासो छ ?
हुन त भनिन्छ, प्रेम गरिने होइन, हुने कुरा हो । त्यो अन्जानमा, बेहोसीमा र कहिलेकाहीँ त भूलवश पनि भइदिन्छ । फ्रेडरिक नित्चे, जर्मन दार्शनिक भन्छन्, ‘एकजनासँग मात्र प्रेम गर्नुर् बर्बरता हो । किनकि, त्यो बाँकी अरू सबैको मूल्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ । ईश्वरसँगको प्रेम पनि त्यस्तै हो ।
प्रेमका बारेमा कति श्लोक, गीत, कविता लेखिए, कति काव्य, महाकाव्य लेखिए, कति प्रेमगाथा, कथा र उपन्यास लेखिए, के लेखा-जोखा र ! तर, के तिनले प्रेमलाई परिभाषित गर्नसके होलान् ? तिनले भने होलान्, हो, प्रेममा आकर्षण हुन्छ, अनुराग हुन्छ । आसक्ति र आतुरता हुन्छ । अधिकार र जिम्मेवारी पनि हुन्छ । र, हामीले भन्यौँ, यिनीहरूको उचित सन्तुलन नै प्रेम हो ।
यही फास्टफुड जमानामा पनि अव्यक्त प्रेममा जुन ताकत हुन्छ, त्यो बिहान-बेलुकी पुनर्वर्गीकरण गरिरहनुपर्ने प्रेममा कहाँ हुन्छ र ? भ्यालेन्टाइन डेमा उपहारमा प्राप्त गुलाफको फूलको जस्तो आयु भएको प्रेम गर्नेहरूलाई के थाहा चिरायु प्रेमको कथा ।
अन्त्यमा आफ्नै कथा,
मेरा पिताजीले आजभन्दा झन्डै आधा शताब्दीअघि अन्तर्जातीय विवाह गरे । परम्पराको साङ्लो आजजति खुकुलो निश्चय नै थिएन । जातीय विभेदलाई कागजी रूपमै भए पनि दण्डित मानिएको मुलुकी ऐन आइसकेको पनि थिएन । त्यसैले त्यो एकप्रकारको विदोह नै मानिन्थ्यो अन्तर्जातीय विवाह : एउटा तागाधारी ब्राह्मणपुत्रले मतुवालीलाई विवाह गर्नु । उहाँहरूको प्रेम र विवाहको पहिलो निसानी म जेठो सन्तान । जबदेखि मैले होस सम्हालेँ उहाँहरूको जीवन दुःख र संघर्षले भरिपूर्ण देखँ । सादा, तर कठिन जीवन थियो, त्यो । दुःख-सुखका उतार-चढाव धेरै थिएनन् । आफूले मन पराएर विवाह गरेकीलाई कति मन दिन सक्नुभयो कुन्नि ! प्रेमको कस्तो अर्थ रह्यो उहाँहरूको जीवनमा मैले बुझ्न पाइसकेको थिइनँ । प्रेमको अभिव्यक्ति कस्तो हुन्थ्यो म राम्ररी जान्दिनथँ सायद, तर त्यस्तो उदाहरण कहिल्यै थाहा पाइनँ । जब मेरी आमाको अल्पायुमै मृत्यु भयो । पिताजी मूर्छित हुनुभयो । एकातिर आमाको पार्थिव शरीर अर्कातर्फ मूर्छित हुँदै, बौरिँदै गरेका मेरा पिताजी । हामी भर्खरै आमाको ममताबाट वञ्चित बनाइएका, हुर्कंदो उमेरका सन्तान वरिपरि नै थियौँ । झन्डै मध्य भइसकेको मंसिरको रात थियो, त्यो । अन्योल, अत्यासपूर्ण र अन्धकार । छिमेकी, आफन्त सान्त्वना दिँदै थिए । जगको रीत यस्तै हो भनेर सम्झाउन खोज्दै थिए । तैपनि, उहाँलाई सम्हालिन गाह्रो भइरहेको थियो । ‘मानिसलाई दुःखको वेलामा जोडेको फुटेको माटाको हाँडी त कति प्यारो हुन्छ, मेरो त जीवनसंगिनी । मलाई सबभन्दा दुःखको वेलामा साथ दिने मान्छे । म कसरी सहन सकुँला र यो वियोग ।’ सायद मेरा पीताजीले व्यक्त गरेको प्रेमको ‘बोल्ड स्टेटमेन्ट’ थियो त्यो । अफसोच त्यो ढिलो गरी आएको स्टेटमेन्ट साबित भयो । तर, आज मलाई लाग्छ, मेरी आमाले जीवनभर अव्यक्त रहेको त्यसको मर्म बुझेकी थिइन् । मेरा लागि ती सबभन्दा आदर्शप्रेमी हुन् ।
(यो लेख नया पत्रिका दैनिकमा 2009-05-09, Saturday प्रकाशित भइ सकेको छ ।)
He isalecturer at the Central Department of Sociology/Anthropology, Tribhuvan University
Posted in: Love, Occasional Program, Sociology